Vaovao - Ny mari-pankasitrahana ho an'ny mpiasa miavaka amin'ny 27 Jan 2021
Ny lanonana loka ho an'ireo mpiasa miavaka amin'ny 27 Jan 2021
Notanterahina omaly tolakandro tao amin'ny Perfect Display ny lanonana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpiasa miavaka amin'ny taona 2020. Voakasiky ny onja faharoa an'ny COVID-19. Ny mpiara-miasa rehetra dia nivory teo an-tampontrano tao amin'ny 15F handray anjara amin'ny lanonana fankalazana isan-taona ho an'ireo mpiasa miavaka. Notarihin'i Chen Fang avy amin'ny foibem-pitantanana ny fivoriana.
Nilaza izy fa, tamin'ny taona miavaka tamin'ny taona 2020, ny mpiara-miasa rehetra dia naharesy zava-tsarotra ary nahavita zava-bita nahafa-po, izay eo amin'ny ezaky ny mpiara-miasa rehetra. Solontena fotsiny ny mpiasa miavaka ankehitriny. Manana toetra iraisana izy ireo: heverin'izy ireo ho toy ny iraka ampanaovina azy ireo ary mitady ny tsara indrindra. Na dia amin'ny asa mahazatra indrindra aza dia mitaky ny tenany amin'ny fenitra avo lenta izy ireo. Miahiahy momba ny orinasa izy ireo, manolo-tena ary vonona handray anjara.
Nasongadin'i Chen Fang: ny mpiasa mandray anjara mangina dia ivon-kevitry ny fampandrosoana orinasa; Ireo mpisava lalana ny fanavaozana sy ny fampandrosoana, manokatra tsena any ivelany izy ireo, mitarika ny fironana ary mampalaza azy erak'izao tontolo izao; Ny mpitarika ny tolona mafy dia mitantana amin'ny fomba mahomby ary mampitombo ny vola miditra ary mampihena ny fandaniana. Ny mpiasantsika manana ireo toetra tsara ireo dia tsy iray amin'ireo hery mitarika ho amin'ny fampandrosoana haingana, fa koa ireo mpikirakira sy mpandova ny kolotsaina orinasa!
Tamin'ny faran'ny fivoriana dia nanao lahateny famaranana ny filoha Andriamatoa He:
1. Ny mpiasa mahay dia ny solontenan'ny ekipanay mahay.
2. Mametraha ny tanjona kendren'ny varotra sy ny vokatra amin'ny 2021, ary ny orinasa dia hitazona ny taham-pisondrotana isan-taona eo amin'ny 50%. Miantso ny mpiasa rehetra mba hiasa mafy hatrany.
3. Araho ny antson'ny governemanta, miomàna tsy hiverina an-tanindrazana mandritra ny taona vaovao raha tsy ilaina izany. Hanome 500 yuan ho an'ireo mpiara-miasa izay mijanona ao Shenzhen ny orinasa ary handany taona vaovao hafa miaraka amin'izy ireo.